David lah.2014., sermon articles
The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 3130793 views
AI and Machine Learning Demystified... by Carol Smith 4364874 views
10 facts about jobs in the future by Pew Research Cent... 1390798 views
Harry Surden - Artificial Intellige... by Harry Surden 1050923 views
Inside Google's Numbers in 2017 by Rand Fishkin 1613424 views
Pinot: Realtime Distributed OLAP da... by Kishore Gopalakri... 836356 views
မြန်မာပြည် လှည်းကူး၊ဖောင်ကြီးတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ မိသားစု၊ အခြေချခဲ့ရာ၊ အသက်၃၀တွင် သင်းအုပ်ဆရာအလုပ် စတင်ခဲ့သည်။
၅နှစ်ခန့်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃မှ စပြီး၊ နိုးကြားထကြွခြင်း တရားပွဲများ
အဆက်မပြက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများစွာတွင် လူပေါင်းများစွာကိုေ ဟာပြောနိုးဆော်နေသူ ဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်သည်။ မုရန်မဂ္ဂဇင်းမှ ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းအချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
- ဇာတိနှင့်လုပ်ဆောင်သူများ စာမျက်နှာ-၁
- ငွေကြေး စာ-၂
- ကောင်းကင်ယဉ်ကျေးမှု စာ-၄
- ဖခင်များနေ့ ၂၀၁၄ ဇွန်လ စာ-၆
- အလှုငွေ၊ လူအများကြီးလာသောအသင်းတော် (မုရန်) စာ-၉
- မတရားသောမေထုန်နှင့်ကွဲပြားသောအသင်းတော် စာ-၁၀
- အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၁) စာ-၁၁
- အကောင်းမြတ်ဆုံး (မြစ်ကြီးနား) စာ-၁၃
- မြန်မာလူငယ်ညီလာခံ (ချင်းမိုင်) စာ-၁၉
- ဘုရားထံဆပ်ကပ်သူ သိုးများ (စင်ကာပူ) စာ-၂၂
- သမ္မာတရားနှင့်အမှန်တရား (ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း)၊ လောမဲ စာ-၂၅
- တောင်ခုနှစ်လုံး7Mountains (ဘန်ကောက်) စာ-၃၀
- ယူတြု YouTube ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများ တရားဒေသနာ စာ-၃၃
အောက်တိုဘာ-၂၀၁၄၊ မုရန်မဂ္ဂဇင်း Website: murann.com
1. Rev David Lah isaBurmese Revival Evangelist, living in Canada and travel all over the world especially to Burmese Christian Communities. ဆရာဒေးဗစ်လား မြန်မာပြည် လှည်းကူး၊ဖောင်ကြီးတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ မိသားစု၊ အခြေချခဲ့ရာ၊ အသက်၃၀တွင် သင်းအုပ်ဆရာအလုပ် စတင်ခဲ့သည်။ ၅နှစ်ခန့်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃မှ စပြီး၊ နိုးကြားထကြွခြင်း တရားပွဲများ အဆက်မပြက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများစွာတွင် လူပေါင်းများစွာကို ဟောပြောနိုးဆော်နေသူ ဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်သည်။ မုရန်မဂ္ဂဇင်းမှ ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းအချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။ မာတိကာ - ဇာတိနှင့်လုပ်ဆောင်သူများ စာမျက်နှာ-၁ - ငွေကြေး စာ-၂ - ကောင်းကင်ယဉ်ကျေးမှု စာ-၄ - ဖခင်များနေ့ ၂၀၁၄ ဇွန်လ စာ-၆ - အလှုငွေ၊ လူအများကြီးလာသောအသင်းတော် (မုရန်) စာ-၉ - မတရားသောမေထုန်နှင့်ကွဲပြားသောအသင်းတော် စာ-၁၀ - အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၁) စာ-၁၁ - အကောင်းမြတ်ဆုံး (မြစ်ကြီးနား) စာ-၁၃ - မြန်မာလူငယ်ညီလာခံ (ချင်းမိုင်) စာ-၁၉ - ဘုရားထံဆပ်ကပ်သူ သိုးများ (စင်ကာပူ) စာ-၂၂ - သမ္မာတရားနှင့်အမှန်တရား (ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း)၊ လောမဲ စာ-၂၅ - တောင်ခုနှစ်လုံး7Mountains (ဘန်ကောက်) စာ-၃၀ - ယူတြု YouTube ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများ တရားဒေသနာ စာ-၃၃ အောက်တိုဘာ-၂၀၁၄၊ မုရန်မဂ္ဂဇင်း Website: murann.com ဆရာဒေးဗစ်လား ဖေ့စ်ဘုတ်ဓါတ်ပုံဖြစ်သည်။
2. ဇာ တိ နဲ့လုပ်ဆောင် နေ သူ များ အ တွက် .. ဒေဗစ်လား..။ ဟိုး တ နေ့၊ တ ချိန် တုန်း က ကျ နော့် ကို နေ ရာ မ ပေး ခဲ့ ဘူး၊ အ သုံး မ ကျ ခဲ့ တဲ့ ဘ ဝ မှာ နှစ် ပေါင်း များ စွာ နေ ခဲ့ ရတယ်။ အခု တော့ ကျေး ဇူး တော် ကြောင့် တရား ဟော ပွဲတွေ နယူဇီလန်၊ စင်ကာပူ၊ သြစတြေလျှား၊ အမေရိကား စသဖြင့်.များစွာ အစီအစဉ် တွေ ရှိ နေ တယ်။ အချိန် အား လုံး ကို ကျ နော် ကို ဘု ရား သခင် အသုံး ချ နေ တာ ကို တွေ့ ရ တဲ့ အခါ ပို ပြီး ဘုရားကို ဆက် ကပ် ချင် လာတယ်။ ဘုရား အမှု တော်ကို ပိုပြီး ထမ်းဆောင်ချင် လာပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို ပို ပြီး နား လည် လာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း ဘုရား သခင် သွန် သင် မှု တွေ မသိလိုက်ရပဲ မြေကြီး ထဲပြန်ရောက် မသွား ပါ စေ နဲ့။ စားသောက် အလုပ် လုပ်ပြီး မြေကြီး ထဲ ဝင်သွား တဲ့ လူတွေ အများ ကြီးပဲ။ ကျနော် ဟာ နှစ်ပေါင်း များစွာ အသုံး မကျ၊ ဒုက္ခ ရောက် ခဲ့ ရ တယ်။ ဒါတွေ ဟာ ကျနော့် ကို ပြုပြင် နေ တယ်။ ကျနော့် ကြောင့် လူငယ် တွေ များစွာ ပြောင်းလဲ လာမယ် ဆိုတဲ့ ရုပါရုံ ကို ရပြီး တဲ့ နောက် မှာ ကျနော် အလကား မနေ တော့ ပါဘူး။ ဘုရား သွန်သင်ခြင်း တွေ ကို နားမလည်တဲ့ လူတွေ၊ လက် သီး လက် မောင်း တန်း နေ သူတွေ၊ တခါမှား ပြီး နား မလည် သေး ပဲ၊ နောက် တစ်ယောက် နဲ့ ထပ်မှား တယ်၊ အဲ ဒီ လို ဆက် လုပ် နေတယ်.. မ ရ ဘူး။ နောက်ဆုံး လောကကြီးထဲကနေ ခင်ဗျား ဘာမှမဟုတ်ပဲ ထွက်သွား၊ သေသွားရတော့မယ်။ လောက အတွက် လည်း တန်ဘိုး မရှိ ဘူး။ မိသားစု အတွက် လည်း အကျိုး မရှိ ဘူး၊ အိမ်ထောင် အတွက် လည်း တန်ဘိုး မရှိ ဘူး။ နိုင်ငံတော် အတွက် လည်း တန်ဘိုး မရှိ ဘူး။ နောက်ဆုံး အသုံး မကျပဲ သေဆုံး သွားတဲ့ အခြေအနေ မဖြစ် စေ ချင် ဘူး။ ခင်ဗျား တို့ အပေါ် မှာ ဘုရား အကြံ အစည် ရှိပါ တယ်။ ဟာ လေ လု ယ...။ . Who listen/read this5minutes clip, God Bless You, ... Go much better Christian Life.... (Murann) Murann Ezine shared Jhon Newton's video. Yesterday at 4:47am ·
3. Murann Ezine added3new photos. October2at 6:42am · ငွေကြေး အကြွေးကျေဖို့ဆုတောင်းတဲ့လူ၊ ဆုတောင်းခံတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျိုးပဲ့ကျေမွသောနှလုံးသားနဲ့ နောင်တရပြီး၊ ယေရှုထံပြန်လာသူကို အမြဲလက်ခံပါတယ်။ ဆုတောင်းချက်ကို နားညောင်းပါတယ်။ ဆုတောင်းရင် ..ဆုံးဖြက်ချက်ချရပါတယ်။ ဒီတခါအကြွေးကျေသွားရင် ...နောက်တခါဘယ်တော့မှ..အကြွေးမယူတော့ဘူး။ ငတ်ပြတ်ဒုက္ခရောက်သွားပါစေတော့..သူများဆီက အကြွေးဘယ်တော့မှ ထပ်မယူတော့ပါဘူး..လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ခိုင်မာစွာချနိုင်ရင်..အကြွေးကျေပြီး၊ တကယ်လဲ နောက်တခါ အကြွေးမတင်တော့ပါဘူး။ ငါ့အကြွေးတွေ ကျေပါစေ...လို့ ဘုရားကျောင်းမှာဆုတောင်း၊ ဆရာတွေလာတိုင်း အလှုငွေပေး..ဆုတောင်းချက်တင်... ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ပိုက်ဆံတွေ ရလာပြီး၊..အကြွေးတော့ ကျေကောင်းကျေသွားပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိ၊ မပြတ်သားတော့..နောက်တနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ အကြွေးတွေ ထပ်တင်လာပြန်တယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တခါဖြစ်ဘူးရင်လဲ ..နောက်တခါ ကြိုးပဲကြွေမွတဲ့စိတ်နဲ့ ထပ်မံဆုတောင်းရင်.. ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါသေးတယ်။ ဒီလို ...ကောင်းကြီးတွေ ရပြီး၊ လောကမှာ ငွေကြွေးဖိစီးမှုကို အဆက်မပြတ်ခံစားနေရသူတွေ ရှိပါတယ်။ မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ေေေေေေ ငွေကြေး၊ အကြွေးဖိစီးမှုက လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ ..ဆုံးဖြတ်ချက်တခု.. နောက်ကိုဘယ်တော့မှ အကြွေးမယူတော့ပါဘူး... ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဂတိတစ်ခုတော့ ဘုရားနဲ့မှန်ကန်ဖို့၊ လိုပါတယ်။ . ဆန္ဒရှိယုံနဲ့ မရပါဘး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ လိုပါတယ်။ . ငွေကြေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး၊ ငွေရလာရင် ဘာလုပ်မလဲ မေးခွန်းကို ကျမ်းစာနဲ့အညီ တိုးပွားအောင်လုပ်မယ် ဖြေပါတယ်။ အမှန်က ဘုရားပိုင်တဲ့ပိုက်ဆံ... ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးပစ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူများစွာက ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ဖယ်လိုက်ဖို့တော့ ဦးစွာသတိရကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို့ပေးရမယ်ဆိုတာ.. ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားပါဘူး။ ကိုယ်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ..ဆုတောင်းပြီး၊ စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်း ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ငွေကို သုံးကြတယ်။ ပေးကြပါတယ်။ တစ်ချို့ မိဘကိုပေးတယ်။ မိဘက ကိုယ်ကို ဝိညာဉ်ခွန်အားပေး၊ ဆုတောင်းပေး၊ ဖုန်းအမြဲဆက်ပြီး ဘုရားကိုနံပတ်တစ် ထားဖို့အားပေးတတ်တဲ့ မိဘာများအတွက် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးချင်ပေးနိုင်ပေမဲ့...တကယ်တော့၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတာ
4. ထားဖို့အားပေးတတ်တဲ့ မိဘာများအတွက် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးချင်ပေးနိုင်ပေမဲ့...တကယ်တော့၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတာ ..အသင်းတော်ကို ပေးတာ အမှန်ကန်ဆုံး၊ ကျမ်းစာနဲ့အညီဆုံးပါ။ . ကိုယ်ကို ဝိညာဉ်ခွန်အားပေးတဲ့ အသင်းတော်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပေးရမယ်။ ကိုယ်တက်တဲ့အသင်းတော်ကို ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်ကိုဝိညာဉ်ခွန်အားပေးတဲ့ ဥပမာ အမ်စီအေ အသင်းတော်ကို ပေးမယ်ဆိုရင်လဲ၊ ကျွန်တော်လည်း ကနေဒါမှာနေပေမဲ့ ခွန်အားရတဲ့ အမ်စီအေအသင်းတော်ကို ပေးပါတယ်။ အပြောကောင်းပြီး၊ အလှုငွေကောက်ခံလာတိုင်း အီမိုးရှင်းနဲ့ခဏတာထိတွေ့ပြီး ပေးတာမျိုးတွေ ရှိတတ်၊ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ထိတွေ့တဲ့ ဝိညာဉ်ခွန်အားပေးတဲ့ အသင်းတော်ကို ပေးလိုက်တာ အကောာင်းဆုံးပါ။ . လူမှုရေးအရ အားနာပြီး ဘုရားကျောင်းကို လာတာမျိုးလဲ မလုပ်ပါနဲ့။ ဆရာပီတာနဲ့ ရင်းနှီးလို့၊ အားနာလို့၊ ခေါ်လို့ လာရတာမျိုး ..ဖြစ်နေရင်လဲ ဒါမျိုးဟာ Family Business လုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အိန္နိယနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်သာသနာ ဘာကြောင့် မထွန်းကားသလဲဆိုတာ့ မိသားစုလုပ်ငန်းလို လုပ်ကိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးမျာ အဖေစီးပွားရေးကို သားကပြန်လုပ်၊ မြေးကဆက်လုပ်.. မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးတွေ အိန္နိယမှာ ရှိပါတယ်။ ခရစ်တော်အလုပ်ကို ဒီလိုလုပ်ရင် မကြီးပွား၊ မတိုးပွားနိုင်ပါဘူ။ .ြ မြန်မာပြည် ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှ ဆရာကြီးတွေ အများကြီးနဲ့ ဒေဗစ်လား၊ ငယ်ရွယ်ပေမဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် တက်ရောက်ခွင့်၊ နားထောင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေများ ဆွေးနွေးကြသလဲလို့ နားထောင်ကြည့်တော့ အမှုဆောင်သားသမီးတွေ ၊ အမှုဆောင်ပြန်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတယ်။ မှားတယ်လို့ ခံယူပါတယ်။ . ဧလိယ နဲ့ ဧလိရှဲ အမျိုးမတော်ပါဘူး။ မောရှေနဲ့ယောရှု အမျိုးမတော်ပါဘူး၊ ရှင်မွေလနဲ့ဒါဝတ် အမျိုးမတော်ပါဘူး။ သူ့နေရာကို ဆက်ခံဖို့ အမျိုးတော်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါမျိုးမှ ဘုရားသခင်အမှုတော်ကို ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းလင်းစေပါတယ်။ . သင်ရှိတဲ့နေရာမှ အလင်းလင်းနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ . ဒီခေတ်ကာလမှာ အမှုဆောင်ဖြစ်မှ ဘုရားအလုပ်လုပ်တာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ရင်း အမှုဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်လုပ်ရင်၊ သူနာပြုလုပ်ရင်း ..အမှုတော်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ Brighten the conor where you are ... ဆိုတဲ့အတိုင်း သင်ရှိတဲ့နေရာမှာ အလင်းလင်းနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှင်နေတုံးမှာပဲ ကိုယ့်ကို တကယ် ကယ်တင်တဲ့ ၊ ငါတို့အပြစ်အတွေက် ယေရှုအသေခံသွားတယ်။ အဲဒီယေရှုကို ငါယုံကြည်တယ်.. ဆိုတဲ့အကြောင်း ..ပြောပါ။ . ခန္တာသေခြင်းနဲ့ ထာဝရသေခြင်း ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ခန္တာကတော့ သေသွားပေမဲ့.. ထာဝရသေခြင်းဆိုတဲ့ ငရဲကို မရောက်ဖို့ လူတွေကို ကယ်တင်ခြင်းတရား၊ ဟောပြောရပါမယ်။ ဒါကြောင့်.. ၁။ မိမိကို ထားတဲ့နေရာမှာ ဘယ်နေရာပဲရှိပါစေ၊ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ပါ။ Hope for the best. ဥပမာ.. အသက်၄၀ပြည်လဲ အိမ်ထောင်ကောင်း၊ ကျဖို့ မျှော်လင့်ချက်ထားပါ။ (ရယ်စရာ) ၂။ အဆိုးဆုံးကိုလဲ ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ထားပါ။ Prepare for the worst. အိမ်ထောင်မကျသေးရင်လဲ ဘုရားအလိုတော်ကို လက်ခံပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ခရစ်တော်ကိုယ်တိင် ခံယူသွားတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပဲ။ အဲဒီထက် ဆိုးတာမရှိတော့ပါဘူး။ ယေရှုကိုယ်တိုင် ဤခွက်ကို လွန်သွားနိုင်ရင် လွန်ပါစေ ..ဆုတောင်းပေမဲ့၊ အလိုတော်ကို ကားတိုင်တက်ဖို့ ..ဖြစ်လို့ ..အဆိုးဆုံးကို ခံယူသွားတယ်။ အဲဒီ အဆိုးဆုံးကို ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ ..ထာဝရအသက်ရတယ်။ ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မျာ .. ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ရတယ်။ အသက်ပြန်ရှင်တဲ့ ယေရှုရဲ့ ပုံသက်သေရှိပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကို ခံဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ ၃။ အကောင်းဆုံးကို လုပ်ဆာင်ပါ။ Do your best..ရောက်တဲ့နေရာ၊ ရှိတဲ့နေရာမှာ စိတ်ပျက်၊ ပျင်းယိ၊ တွေဝေမနေပဲ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို .. အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။ ဝင်ငွေမရှိ၊ အလုပ်မရှိ ဖြစ်နေလဲ၊ အကြွေးတွေ တင်နေလဲ.. ဘုရားကို နံပါတ်တစ်၊ ဘုရားကို စွဲမြဲဆပ်ကပ်ပါ။ ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါ။ လုပ်စရာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားမတတ်နိုင်တာ မရှိပါဘူး။ လူတွေကတော့ .. အားကိုးရင်.. ပိုပြီးခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်။ ဘုရားကို အားကိုးပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပါ... အားလုံးကို ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ...
5. အားလုံးကို ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ... ******* သက်သေခံချက်။ မယုံကြည်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး မမာလာ.. သက်သေခံပါတယ်။ ၃ကြိမ်တိုင် သားပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ miscarriage ဖြစ်ပြီး၊ ဗိုက်အောင့်.. အသားရေခမ်းခြောက်၊ အားနည်းပြီး စိန့်ဖ၇စ်စစ် ဆေးရုံမှာ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ကုသ၊ ဆေးစစ်ခံပါတယ်။ အမေရိကားရောက်ပြီး ၃နှစ်ကြာတဲ့အချိန် .. ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ခင်ပွန်းသည်က ဆရာဒေဗစ်လား တရားဟောတဲ့ဆီ ခေါ်သွားပါတယ်။ ၂ရက်နားထောင်ပြီး၊ ၃ရက်မြောက်နေ့မှာ ... ရှေ့ထွက်၊ ဆုတောင်းခံဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ရင်ဖတ်နာတဲ့ သူမ .. ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားကို ဘယ်လိုဆက်ကပ်ရမယ် သိလာပါတယ်။ ကျိုးပဲကျေမွတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ကိုယ့်အပြစ်တွေကို ဝန်ခံ၊ မိမိကို ကယ်တင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါတွေလဲ ပျောက်ကင်းသက်သာခွင့် ခံစားရကြောင်း မျက်ရည်နဲ့ သက်သေခံသွားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်အမျိုးသားတစ်ဦးက ကူညီ ဘာသာပြန် ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Murann Ezine June 17 · ဘုရားအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင် လိုအပ်တဲ့အရာများကို ဘုရားက ပေးလာပါတယ်။ ပြောချင်တာက .. အမေရိကားနိုင်ငံက ချမ်းသာတယ်။ အမေရိကားနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အီသီယိုပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် သံရုံ့း၊ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံမှာလဲ အမေရိကန်သံရုံးရှိတယ်လေ..။ အီသီယိုးပီးယား ဘယ်လောက်ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲ။ အဲဒီဆင်းရဲခြင်းက အမေရိကန်သံရုံးကို ဒုက္ခပေးသလား။ သွားပြီးတော့ Affect ဖြစ်သလား..။ မဖြစ်ဘူး..။ အီသီယိုးပီးယားမှာ ရေတွေမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ .. အီသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကြီးကတော့ ရေတွေ အပြည့်ပဲ။ ဘယ်က ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ သူနေနေတာလဲ။ အမေရိကားက ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ သူနေနေတာ။ အီသီယိုးပီးယာမှာ မစားနိုင်တဲ့ Cheese သူစားနေရတယ်။ ..အီသီယိုးပီးယားမှာ မစားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေအားလုံး အီသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက အကုန်စားနိုင်တယ်။ ပြောချင်တာက .. အရေးကြီးတာ ဒီနေ့ ခရစ်ယန်တွေဖြစ်ရက်နဲ့ ၀ိညဉ်၊ခန္တာ ဆင်းရဲမွဲတေနေတာက ဘာသာရေးသမားတွေ များတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်မရှင်ကြလို့...။ အမေရိကားနိုင်ငံကြွယ်ဝတယ်။ နိုင်ငံကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လွန်းလို့ သူတို့က ဘာလုပ်တယ်သိလား၊ သူတို့ Culture ကို ပြတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကို ကျွန်တော်ပြောမယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံစံကို သူတို့ လုံးဝမတုဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံရုံး ရှိတဲ့နေရာမှာ သွားကြည့်ကြည့်၊ အီသီယိုပီးယားမှာရောက်ရောက်၊ ဟိုး .. ဂျပန်မှာရောက်ရောက်.. ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကို ပြောပြမယ်။ အဲဒီ အမေရိကန်သံရုံးထဲမှာ ဂျပန်ပစ္စည်း တခုမှမရှိဘူး။ ကြည့်...။ လုံးဝရှိခွင့်မပေးဘူး။ ၀တ်တာလည်း ဂျပန်လို လုံးဝမ၀တ်ဘူး။ အမေရိကန်သံရုံးထဲမှာ သွားကြည့်လိုက်၊ အလုပ်သမားအားလုံးလဲ အမေရိကန်အ၀တ်အစားပဲ ၀တ်ရတယ်။ အမေရိကန်တွေ ၀တ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ သူတို့ဝတ်ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲသိလား။ သူတို့ Culture ကို သူတို့ထိန်းထားတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ကော နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့ Culture ကို မထိန်းသင့်ဘူးလား။ ... ကျွန်တော်တို့ Culture ကျွန်တော်တိုို့ထိန်းရမယ်။ Culture ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ..အိုကေ၊
6. မထိန်းသင့်ဘူးလား။ ... ကျွန်တော်တို့ Culture ကျွန်တော်တိုို့ထိန်းရမယ်။ Culture ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ..အိုကေ၊ နိုင်ငံသားတယောက် ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံစံကိုကြည့်ရင် ဥပမာ ဆော်လမွန်မင်းကြီးရဲ့ အသက်တာကိုကြည့်ရင် ဆော်လမွန်စကားတခွန်းမှ မပြောပဲနဲ့ဆော်လမွန်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကို ရှေဘပြည်က မိဘုရား ကိုးကွယ်ဖို့ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ .. ဆော်လမွန်နဲ ဘုရားနဲ့အဆက်ရှိတယ်။ အစပိုင်းမှာ အစပ်တော်တော်ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း သူကျဆင်းသွားတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာတော့ ကောင်းတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဘုရားနဲ့ အဆက်ရှိသူတိုင်းက ဆော်လမွန်လိုဖြစ်ချင်တာ။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဖို့ ဘုရားက အလိုတော်ရှိတယ်။ ဟာ.. ဒီလူလိုဖြစ်ချင်လိုက်တာ.. ဖြစ်ချင်လိုက်တာကွာလို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Culture ကို ထိန်းထားရတယ်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ .. ဘုရားသခင်နိုင်ငံထဲမှာ Living Together မရှိဘူး။ Culture ထိန်းပစ်လိုက်ရတယ် ..သိလား။ ငါတို့ Culture ထဲမှာ Living Together မနေဘူးကွ။ ငါတို့ Culture မှာ လက်ထပ်ပြီးမှ ဆက်ဆံတယ်ကွ။ ငါတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ အရက်မသောက်ဘူးကွ၊ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဘိန်းမစားဘူးကွ..။ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာ မိန်းမ မလိုက်စားဘူးကွ။ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာ မကောင်းတဲ့ကား မကြည့်ဘူးကွ။ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာ သွားတွေ ပေညှစ်နေအောင် ကွမ်းမစားဘူးကွ..။ နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုကို ကျွန်တော်တို့က လုံဝထိန်းထားတာ..။ ပြီးတော့မှ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးသွားလိုက်။ ဂျပန်စာ တခုမှ မစားရဘူး။ အမေရိကန်အစာတွေပဲ ချကျွေးတာ။ သူတို့ ဘာပဲစားသလဲ .. စားပြတာ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ .. အမေရိကန်အစာပဲ စားတာကွ။ ဒါပဲလား .. မဟုတ်ဘူ။ သံရုံမှာ စားဖူးတဲ့လူတွေ ရှိသလား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် စားဖူးပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ပါ။ ဘုရားရဲ့အမှုတော် ဆောင်လာရင် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော် ဒေးဗစ်ဟာလဲ သံရုံးတွေဘာတွေ သွားစားရတယ်။ မစားတတ်တော့ သူများတွေ ဘယ်လိုစားတယ်ဆိုတာ ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့... ဇွန်းတွေကလည်း အများကြီး၊ အရှက်တွေ ကွဲတော့မလို့ .(ရယ်သံများ) ..အဲဒီဇွန်းကအစ...အမေရိကန် တံဆိပ်နဲဗျ။ American Flag လေ..။ အသားတံဆိပ်ရိုက်ထားတာ။ ဇွန်းကလည်း ဘာဖေါ်ပြသလဲဆိုတော့ ဒီဇွန်းက ငါတို့အမေရိကားက လုပ်တဲ့ဇွန်းကွ၊ ပန်းကန်.. အံမယ်၊ ပန်းကန်ရွှေ့လို့မရအောင် .. အပေါ်နဲ့အောက် အလံရှိတဲ့နေရာမှာ လုံးဝရွှေ့လို့မရအောင် ပန်းကန်ကို ဒိအတိုင်းထားထားရတယ်။ Culture ကို အဲဒီလိုထိန်းတာ..။ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံသားဆိုရင် ..ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားရဲ့အတွေးအခေါ် ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ စထည့်ကြရအောင်။ ဒီနိုင်ငံရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပုဆိုးတွေ၊ ထမီတွေ သိပ်မ၀တ်ကြတော့ဘူးလေ။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့ ထိုင်းပုံစံဝတ်ကြတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတယ်..ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ နိုင်ငံခြားတယောက်ရဲ့ Culture ကိုတော့ ထိန်းရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းရမယ်။ သူတို့ထိန်းထားတာ .. အပြက်ထိန်းထားတာ။ ပြီးတော့ စီးတဲ့ကား..။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက်လို့ ဂျပန်ကားကောင်းတော့ ဂျပန်ကားမစီးဘူးဗျ..။ အမေရိကား အကောင်...ဆုံးကားကို ဂျပန်မှထုတ်ပြီးတော့ ကြွားတာ။ ပြောင်နေတာပဲ။ သံအမတ်ကြီးကလည်း ပြောထားတယ်။ အဲဒီကား.. ကောင်းကောင်းဆေးထား။ ဆေးရတယ်..။ ဆေးရုံတင်မကဘူး။။ ဆေးသုတ်၊ ပြောင်နေအောင် ဆေးသုတ်ရတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီသံအမတ် Ambassador ဆိုတာ သံအမတ်ကြီးပေါ့ .. သံအမတ်ကြီးက ဦးထုပ်နဲ့။ အမေရိကားကတောင် ရိုးရိုးလာတာမဟုတ်ဘူး။ တက်ကဆက်က Taxas ကလာတဲ့ ဦးထုပ်အကြီး...ကြီးနဲ့.။ ပြီးတော့ သူအမေရိကန်ဖြစ်တယ်။ တက်ကဆက်ကလာတယ်ဆိုတာ သိအောင် အမိုးဖွင့်ကားကြီးနဲ့ .. ဟာ...အမိုးပွင့်၊ မောင်းထွက်သားတာ..လူတွေက ၀ိုင်းကြည့်နေရတာ။ သူလုပ်နေတာ အလကားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကြွားနေတာ... (ရယ်သံများ)။ ဘာကြွားတာလဲသိလား.. ငါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ ငါ့နိုင်ငံ ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝသလဲ ..ကြည့်...ဆိုပြီး ချပစ်တာ။ အခုတော့ ဘုရားသားသမီးတွေ၊ နိုင်ငံတော်သားသမီးတွေ .. ကြည့်...ဆိုပြီး မပြောနိုင်ဘူး။ သူများကိုပဲ ရှောက်ကြည့်ပြီး...သူများကိုအားကျနေကြတယ်။ ကိုယ်က ဘုရား အဖေက သနားလိုက်တာ။ အဖေက ငါ ဒါလောက် ကြွယ်ဝရဲ့သားနဲ့ ငါ (ဘုရား)ကို အားမကိုးဘူး။ သူများကို ရှောက်ကြည့်နေတယ်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများတို့ .. ဟာသလေးတော့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားဝမ်းနည်းနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဘာလဲ ..Culture ..ငါ ဟာ ဘုရားနိုင်ငံသား။ ဘုရားရဲ့ Culture ဖြစ်နေရမယ်။ ဆရောဒေးဗစ်လား ဘန်ကောက်မြို့တွင်ပို့ချသော7Mountains , Part(3) ကျမ်းစာသင်တန်းမှ ဘုရားကိုအားကိုးရန် မှ ကောက်နုတ်သည်။ မုရန် Link;
7. Rev David Lah 2014 06 15 sermon ဖခင်များနေ့ (အမ်စီအေ၊ ဘန်ကောက်) သခင်ယေရှုအကြောင်းနှင့်အသီးသီးသောစပါးစေ့၊မျိုးစေ့ ဓမ္မဆရာ(၃)မျိုးရှိပါတယ်။ ၁။ သင်းအုပ်ဆရာ (Pastor) - မလွယ်ပါဘူး။ အသင်းသားများနဲ့အမြဲတွေ့မြင်၊လုပ်ကိုင်ရတော့ ပုံသက်သေအများကြီးပြရပါတယ်။ ၂။ ဧဝံဂေလိဆရာ (Evangelist) - ယေရှုကောင်းမြတ်ခြင်းများကိုမယုံကြည်သူများထံ၊ လိုက်လံပြောရပါတယ်။ ပြောပြီးထွက်ခွာသွားပါတယ်။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ ၃။ ရီဘိုင်းဘယ်လစ် (Revivalist) - ယုံကြည်သူများကို၊ အသစ်တဖန်မွေးဖွားစေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ . . သင်းအုပ်ဆရာ။ ကျနော် အသက်၃၀မှာ ရူပါရုံရပြီး၊ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ သင်းအုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အမြင်မတူတဲ့အသင်းသားများကြားမှာ အလွန်ခက်ခဲပြီး၊ စိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ရ၊ ဘာကြောင့်ဘုရားအလုပ်လုပ်တာ ပင်ပမ်းနေရသလဲ၊ ဆိုပြိး ကိုယ်တော့ကိုမေးပါတယ်။ ၂၁ရက်၊ ရေပဲသောက်ပြီး၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာ အသီးသီးတဲ့အသက်တာအတွက် ရူပါရုံများရရှိပါတယ်။ ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာကနေ ရီဘိုင်ဘယ်လစ်စ် အဖြစ် ကမ္ဘာအနှံ့လိုက်လံဟောကြားဖို့ ဒုက္ခဆင်းရဲများစွာနဲ့ အစပြုခဲ့ပါတယ်။ . ဧဝံဂေလိဆရာ။ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာ အလွန်ဟောပြော၊ သိပ်ကောင်းလှတဲ့ ဆရာမတစ်ဦး၊ အဖွဲ့ထဲပါလာပြီး၊ လေယဉ်ခရီးအတူထွက်ကြတယ်။ လေယဉ်စက်ချို့ယွင်းတယ် ကျေငြာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဆရာမကြီးက ဘေးနားထိုင်တဲ့ သင်းအုပ်ဆရာကို ထုထုပြီး၊ ငိုယိုမြည်တမ်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လေယဉ်မှုးက တော်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာပြီးမှ စက်တစ်လုံးထဲနဲ့ လေယဉ်ကွင်းပြန်ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ လေယဉ်အောက်ရောက်တဲ့အချိန် အဖွဲ့သားအားလုံးက အဲဒီဆရာမကို ဝိုင်းပြီး၊ လက်တင်ဆုတောင်းပေးရပါတယ်။ သူများကို ပြောင်းလဲ၊ခွန်အားရအောင် အလွန်အပြောကောင်းလှပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က လုံးဝ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ . Murann Ezine added2new photos. July 13 ·
8. . ရီဘိုင်ဘယ်လစ်စ်။ ယုံကြည်သူများကို အသစ်တဖန်မွေးဖွားစေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ စပါးစေ့ကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများဘဝမှာ အခွံကာထားပါတယ်။ စပါးစေ့ ပုပ်ပျက်ပြီး၊ မျိုးစေ့အဖြစ် အပင်စိုက်မျိုး၊ ကြီးထွားလာမှ အသီးသီးပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာလဲ ဧလိယ နာမည်ကြီးပရောဖက်ရဲ့ လက်တောက်၊ ဂေဟာစိ ဆိုသူရှိပါတယ်။ ရန်သူစစ်သူကြီးနေမန် အနူရောဂါပျောက်ကင်းလို့ လက်ဆောင်များစွာ ဧလိယ ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ငြင်းပယ်ပေမဲ့၊ တပည့် ဂေဟာစိ က လိုချင်တက်မက်စိတ်နဲ့ လိုက်ပြီးယူပါတယ်။ သူဟာအခွံနဲ့စပါးစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သူကြီးနေမန်ရဲ့ ကျွန်မ ဟာ စပါးစေ့အခွံကျွတ်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အားဖြင့် ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ သင်္ဘောပျက်ရင် သင်္ဘောတစင်းလုံးကို ကယ်မလားဆိုတော့၊ အသက်ကယ်လှေမောင်းသူက သူ့လှေထဲမှာ ဆန့်သလောက်၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ကယ်တင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်နဲ့လိုက်ပြီး ခရီးထွက်တဲ့လူတွေ ၃၊ ၄ယောက်လောက်ပဲ စရိတ်ကုန်ခံပေးရပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်လိုက်လာကြသူချည်းပါ။ မျိုးစေ့များဖြစ်ပါတယ်။ . မိမိကိုယ်ကို ချစ်နေသရွှေ့၊ စပါးစေ့ရဲ့ အခွံကို ဖွင့်မပြမချင်း၊ ဇာတိအားကြီးနေသရွှေ့၊ အသီးမသီးနိုင်ပါဘူး။ . . ကျမ်းပိုဒ် (လိုက်ဆိုပေးကြပါ) ၂ကော်၎း၁၁ ။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ယေရှုသည် အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကို၊ ငါတို့၏ သေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓြွာ၌ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင် ယေရှုကြောင့်သေခြင်းလက်သို့ အစဉ်အပ်နှံ့ခြင်းကိုခံရကြ၏။ ကိုယ်တော်... ကျနော့်အဖေ၊ ကျနော့်အပေါ်နှိပ်စက်၊ ပြောဆို၊ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ကျနော့်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တော်သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့... ကိုယ်တော်ပြောပြလို့ ဝန်ခံမယ်၊ အဖေကို ပြန်ခေါ်မယ်၊ အဖေ့ကို ပြန်လုပ်ကျွေးမယ်၊ ကိုယ်ဇာတိနဲ့ဆို ပြန်ခေါ်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တော်ပြောလို့ ကျနော်လုပ်မယ် ..။ ဒီလိုပဲ သင့်ကိုသင်၊ မျိုးစေ့အနေနဲ့ ခံယူလိုက်မယ်။ . ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်း၊ ဒေဗစ်လား မသေမချင်း၊ တခြားလူတွေမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ သေခြင်းလက်ထဲကို အမြဲအပ်နှံဖို့လိုပါတယ်။ ဒေးဗစ်လား ကျမ်းစာတတ်လို့ဟောရင် လူတွေမပြောင်းလဲပါဘူးခင်ဗျား။ နည်းနည်းတော့ ပြောင်းလဲချင် ပြောင်းလဲပါမယ်။ မျိုးစေ့ဟာ ပုပ်ပျက်ပြီးမှ အပင်ပေါက်၊ အသီးသီးရပါမယ်။ သေချင်းတရားက သင့်ကို ပြုပြင်ဖို့နဲ့၊ သူများအတွက်လည်း အသက်ရှင်ခြင်းတရား ဖြစ်လာရပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး ဟောလို့ရပေမဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကိုတော့ ဟောလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်သားသမီးကို တရားသွားမဟောပါနဲ့။ သူတို့အတွက် ကိုယ်က ပုံသက်သေပြရပါတယ်။ အဖေ အရင်သေမှ သားသမီးများ ပြောင်းလဲပါတယ်။ အဖေ ဘယ်လိုမျိုးစေ့ပါလဲ။ ဘယ်လိုအပျက်ခံထားသလဲ ဆိုတာ သားသမိးတွေ၊ ဇနီးတွေက ကြည့်နေပါတယ်။ လူတိုင်း အခွံ၊ အမာတွေ ခွာမထုတ်ချင်ပါဘူး။ ငါ..ငါ..ငါ.. ဆိုတဲ့ အခွံကို ခွာထုတ်ပစ်ရပါမယ်။ သင်အပျက်ခံရဲရင် များစွာသောအသီးများ သီးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မမြဲသော ရွှေ၊ငွေ၊အိမ်၊ရာထူး စည်းစိမ်ထက် မြဲသောနိုင်ငံတော်ကို မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ယုံကြည်သူများ ဘာကြောင့် ဘဝဇတ်သိမ်းမကောင်းသလဲ မေးပါတယ်။ . ခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်တက်ပြီး၊ အသေမခံခင်မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို မြင်ထားပြီးပါပြီ။ သေခြင်းရဲ့တဖက်မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်၊ ကောင်းကင်ဘုံးကို မြင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ယေရှု၊ ကားတိုင်ထမ်းပြီး တက်သွားပါတယ်။ ယုံကြည်သူများ ဘဝမှာလဲ ဒုက္ခဆင်းရဲ သေခြင်းတဖက်မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ရှိပါတယ်။ ဒါကို မြင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ . ******* . ... အလိုတော်ရှိရာ ပြုတော်မူပါ ... သီချင်းသီဆို၊ ချီးမွမ်းကြပါသည်။ သင်းအုပ် ဆရာဦးဇော်မင်းနှင့်၊ ဆရာတူးဂျာ နှစ်ဦးအား ဖခင်များနေ့ Father Day တရားပလ္လင်ပေါ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အသင်းသားများအားလုံးနှင့်အတူ ဆရာဒေးဗစ်လား ဆရာနှစ်ဦး၏ အားပေးစကား၊ ဒေသနာနှင့် ဆုတောင်းချက်များကို ခံယူပြီး သီဆိုချီးမွမ်းရင်း၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အဆုံးသတ်ပါသည်။
9. ဘုရားသခင်သည် ကျိုးပဲ့ကြေမွသောစိတ်နှလုံးဖြင့်၊ နောင်တဖြင့်၊ဒူးထောက်ဆပ်ကပ်သူကို နှစ်သက်၊လက်ခံပါသည်။ ငွေကြေးလှုဒါန်းလိုပါက ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောလှုဒါန်းခြင်းမှာ စေတနာစိတ်နှင့်လှုဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့ယုံကြည်သူများ မြန်မာပြည်ရှိမိမိအသင်းတော်ကို သံယောဇဉ်ရှိကြသည်။ ယခုအခါ လှုဒါန်းရန်မခက်တော့ပါ။ တခါတည်း ပိုက်ဆံများစွာပေးလိုက်ခြင်းထက် လစဉ် (သို့မဟုတ်) ၃လတစ်ကြိမ် လှုဒါန်းခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ လစဉ်ဒေါ်လာ ၂၀ လှုဒါန်းနိုင်လိုပါက မည်သို့ရွေးချယ်လှုဒါန်းမည်နည်း။ (မဲပေးရန် - http://murann.comသို့သွားကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်)။ Murann Ezine September 28 at 3:52pm ·
10. လူတွေအများကြီးလာတဲ့ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာကြီးများကို သင်းအုပ်ဆရာလေးများက ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာခြင်းတရား၊ ငွေချမ်းသာခြင်းတရားလို့ ပြောကြပြီး လူတွေကို နှစ်သိမ့်မှုပေးကြပါတယ်။ . သခင်ယေရှုနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်၊ ယေရှုကိုယ်တိုင် အနာရောဂါကင်းခြင်း၊ ရေကို ဝိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ မုန်ငါးလုံးငါးနှစ်ကောင်-လူ၅၀၀၀ကို ကြွေးမွေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အနာရောဂါ၊ နတ်ဆိုးနှင်ခြင်းများ၊ သေသူကိုပင်ပြန်ရှင်စေခြင်း...လုပ်ရပ်များကြောင့် လူတွေသောင်းသောင်းဖြဖြ လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားကို ပြောတဲ့အခါ၊ ယာဇ်ပရောဟိတ်များကိုပင် ဆုံးမစကားပြောတဲ့အခါတော့ လူတွေရှဲသွားပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကားတိုင်တက်ချိန်မှာတော့ အမျိုးသမီးများပဲ အနီးကပ်လိုက်လံပြီး၊ တပည့်တော်များကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော် သက်တော်စဉ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင်၊ လူအများကြီးလာတဲ့ တရားပွဲတွေကတော့ လူကြိုက်များအောင် ပြောဆို၊အမူရာကောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောစကားကို လူတွေအလွန်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ အထက်ပါ ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရင် ဂျိုဝယ်အော်စတင် ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆရာကြီးတစ်ပါးရဲ့ တရားပွဲဖြစ်တယ်။ လူချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲသား အားလုံးကို နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်း ဖြေးညှင်း၊ရှင်းလင်းစွာ နှစ်သိမ့်ပြောကြားနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်ကြော်ကြားလှပါတယ်။ ဇနီးသည်နဲ့၂ယောက်တွဲ အားပေး၊ နှုတ်ကပတ်တော် ဟောကြားတဲ့အခါ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ မင်းသမီးအလား အလွန်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ရင်လည်း အလွန်ခွန်အားရတာကို အံ့သြစဖွယ်ပါပဲ။ . ကျနော်လည်း လူအများကြီးရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကို နှစ်သက်၊ ခွန်အားရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်အခက်အခဲနဲ့၊ ဘဝပျက်လုနီးပါး ဖြစ်ရချိန်မှာ လူအများကြီးနဲ့ခွန်အားလုံးဝမရနိုင်တော့ပါဘူး။ လူနည်းနည်းလေး၊ တယောက်ချင်း၊ နှစ်ယောက်ချင်း ဝတ်ပြုခြင်းက ပိုပြီးခွန်အားရပါတော့တယ်။ ဒီလို ကျမ်းမာ၊ချမ်းသာခြင်းတရားများ ဟောတဲ့ဆရာများရဲ့ အသင်းတော်ဟာ၊ လူတွေအများကြီးရောက်လာ၊ နားထောင်ပြီး အလှုငွေများလည်း မြောက်များစွာရပါတယ်။ ထိုတရားဟောဆရာများလည်း သူ့ဖာသာရှိပါစေ။ . သေချာတာကတော့ နှုတ်ကပတ်တော် အစစ်အမှန်ဖြစ်လာရင်၊ လူတွေမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တရားတော်နဲ့ပျော်မွေ့သူများကတော့ နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်အမှန်၊ နောင်တရခြင်း ကို ဟောပါတယ်။ လူတွေရဲ့အပြစ်ကို ဘော်ပြဟောကြားတဲ့ ဓမ္မဆရာများကို အခုခေတ်လူကြိုက်မများတော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့ အသင်းတော်၊ မိတ်သဟာရ ဝတ်ပြုခြင်းမှာ လူ၂၀၊ ၃၀ လောက်ပဲ ရှိရင်လည်း၊ ယုံကြည်သူအချင်းချင်း ခွန်အားရတဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ပိုမိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ လူအများမကြိုက်ပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ . Murann Ezine August 28 ·
11. . ယုံကြည်သူများ၊ ခရစ်ယာန်အားလုံး နှစ်သိမ့်မှု၊ ရန်ငြိမ်းမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပေးနိုင်ကြရုံသာမက၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေပြီး၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကိုယ်တိုင်ရှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူက Joseph Prince, အမေရိကားက Joel Osteen, တောင်ကိုးရီးယားက David Yonggi Cho စတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာများရဲ့ တရားဟာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ နားထောင်သူတိုင်းကို ခွန်အားရစေတယ်။ ... ခပ်ရှင်းရှင်းရေးရရင်... နှစ်သိမ့်၊အားပေးမှုလိုနေသူများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆရာကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရား၊ သေခြင်းတရား လက်ခံရရှိသွားရင်တော့... ကျမ်းပိုဒ်များတိုင်းဟာ နှလုံးသားထဲစွဲနေပါပြီ။ ဒီလိုအဆင့်ရောက်လာရင် ၁၀ဖို့တစ်ဖို့ ၁၀% အသင်းတော်ကို ပေးတတ်လာပါတယ်။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံသမ္မတ ဆိုရင် ၉၀% ပေးလှုပါတယ်။ မသေသေးပါဘူး။ သူဌေးကြီးချောက်ဖီးနေ ဆိုသူ ဒေါ်လာသန်း ၈၀၀၀ အနှစ်၂၀အတွင်း ..အကုန်လှုလိုက်ပါပီ။ မသေသေးပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ ခဏပဲ၊ ထာဝရအသက်က အရှည်ကြီး၊ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာ၊ ဘုရားသခင်နဲ့နေရမှာ သေချာနေသူများကတော့ ဘုရားကျောင်း၊ ကြီးသေး ပြသနာမရှိတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ...။ ...မုရန်.. အမျိုးသားက အမျိုးသမီးကို စစ်မှန်သောအချစ်မဟုတ်ပဲ ခန္တာကိုယ်တပ်မက်ခြင်းဖြင့် သမီးရီးစား၊ ထားခြင်း၊ လက်မထပ်ပဲ အတူနေခြင်းများ ဖြစ်ရသည်။ အမျိုးသားများ တက်မက်ခြင်းမပါလျှင် ထိုသူကို အမျိုးသမီးက လေးစားမည်။ ဘုရားသခင် ကြိုက်နှစ်သက်သော အမျိုးသားဖြစ်သည်။ အာမင်... . အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး - လက်မထပ်ခင်၊ အတူနေခြင်းသည် ကောင်းမြတ်သောဘုရားသား၊သမီးများ မဟုတ်ကြပါ။ . အသင်းတော်များ - အချင်းချင်းပြိုင်စရာမလိုပါ။ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များဖြစ်ပြီး၊ အချင်းချင်းဆုတောင်းပေးရုံသာဖြစ်ပါသည်။ ကျနုပ်အား အနှစ်သက်သော မြန်မာပြည်တွင်းမှ ဆရာသမားများအား Murann Ezine shared Loi Sam Brang's video:မတရားသောမေထုန်နှင့်ကွဲပြားနေသောအသင်းတော်. August 17 ·
12. အချင်းချင်းဆုတောင်းပေးရုံသာဖြစ်ပါသည်။ ကျနုပ်အား အနှစ်သက်သော မြန်မာပြည်တွင်းမှ ဆရာသမားများအား ချစ်ခင်ပါသည်။ လေးစားပါသည်။ အားလုံး ဘုရားသားများ ဖြစ်ကြသောကြောင့်..တည်း။ ဆရာဒေဗစ်လား... ဆရာဒေဗစ်လားChin.TVနှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသည့်ကောက်နုတ်ချက်များ ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် ကျွန်တော့်ကို လှည်းကူးမြို့အနီးက၊ ဖောင်ကြီးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာကြီးပြင်းလာပြီး၊ နှစ်ခြင်းခံခြင်းမှု ဧမာနွေလအသင်း အသက်တာပြောင်လဲခြင်း ၁၆နှစ်အရွယ်ကတည်းက ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဧဝံဂေလိ၊ တရားဟောခြင်းများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အသက်၃၀မှာ သင်းအုပ်ဆ သင်းအုပ်ဆရာမှနယ်လှည့်ဆရာအဖြစ်သို့ အသင်းတော်မှာသင်းအုပ်ဆရာ လုပ်တဲ့အခါ အသင်းတော်တွင်းက ပြသနာများကို မြင်လာပါတယ်။ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ အသင်း Dream Ministry လုပ်ဆောင်နေခြင်း သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်ကို လက်လွှတ်ပြီး Dream Ministry ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရာမှာ၊ ယေရှုကို စံနမူနာထားပါတယ်။ Jesus is my D = Discipleship တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်း R = Revival နိုးကြားမှုများဖြစ်စေခြင်း E = Evangelism ဧဝံဂေလိလုပ်ခြင်း A = Assembly အသင်းတော်များတည်ဆောက်ခြင်း M = Mission မစ်ရှင်လုပ်ခြင်း ...တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံများစွာကိုရောက်ရှိခြင်းနှင့်စံနမူနာပုဂ္ဂိုလ် Murann Ezine added2new photos. February5·
13. နိုင်ငံများစွာကိုရောက်ရှိခြင်းနှင့်စံနမူနာပုဂ္ဂိုလ် ရေတွက်ကြည့်ရင် နိုင်ငံ၂၁ခု ရှိသွားပါပြီ။ သွားမဲ့နိုင်ငံများမှာ အစ္စရေးနိုင်ငံကို သွားဖို့၂ကြိမ်းကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မရောက်ခဲ့သေးပါဘူး။ အ ချင်းမိုင် GMYC 2013 ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ဂျီအမ်ဝိုင်စီ နိုးကြားထကြွမှု လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အများအပြား၊ ပြောင်းလဲကြတယ်လ မြန်မာပြည်အတွက်အားပေးခြင်း ဘုရားကိုသိပ်ချစ်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားများဖြစ်ပါတယ်။ ဗေရိမြို့သားများလိုပဲ လာပြောတဲ့ ဆရာ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့နှင့် ဓမ္မဆရာအရေးပါပုံ ဒီဆရာအားဖြင့် မိမိအသက်တာ ပွင့်ထွက်သွားပြီး၊ ဘုရားကိုသိလာခြင်းဟု ပြောနေသူမျာ အနာရောဂါပျောက်ကင်းခြင်း Miracle Healing မယ်ရီကယ်ဟီးလင်း ဆိုတာကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်လား တရားပွဲတွေမှာ အ ကျွန်တော်ရဲ့ စီကရက် (လျှိုဝှက်ချက်) ကို ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်က နဲနဲလည်တယ်။ ဧဝံဂေလိ ပြောတဲ့အခါတိုင်း တန်ခိုးထွက်တ ယောန ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ပြောတဲ့အခါ နိနဝေမြို့လည်းပြောင်းလဲပါတယ်။ ဒါဏ်ချက်တော်အားဖြင့် အနာရောဂါများ ပျောက်ကင်းမယ်..ဆိုတာကို တကယ်ယုံကြည်တဲ့လူများ မယ်ရီကယ်ဟီလင်း သူတို့အနာ Healing မလုပ်ပါဘူး။ Healer ပဲရှာပါတယ်။ Healthy ကျမ်းမာခြင်းမလုပ်ပါဘူး .. ကျမ်းမာအောင်လုပ်သူကိုပဲ ရှာပါတယ်။ Blessing ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ..ထက် Blesser ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့ဘုရားက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လုပ်နေတာ ဘုရားပါ။ သင်တကယ်ယုံရင် သင်လဲလုပ်နိုင်ပါတယ်....။ The End of Part I .........(18-Sep-2013) ******** ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ တရားဒေသနာများမှ ကောက်နုတ်ချက်များ ဆရာဒေးဗစ်လား Evangelist စင်ကာပူမှာ ၂၀၁၄နှစ်သစ် တရားဒေသနာများ JBCS ဝက်ဆိုဒ်မှာ နားဆင်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတေ - ခရစ်ယန်အသက်တာမှာ ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ငယ်စဉ်ကတဲက သူခံစားခဲ့ရပေမဲ့၊ လောက ကျောင်းစာမေးပွဲမှာ ငယ်စဉ်က - ယခင်ကတော့ နမိတ်လက္ခဏာပြခြင်းများ၊ စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ကျောက်တန်းဟောပြောပဲမှ ဟိန္ဒြူမယုံကြည်သူ ၁၀၀ကျော် ရှေ့၊ လေ - မိမိဘဝ အောင်မြင်ခြင်း (ရွှေ၊ငွေ၊ဥစ္စာ၊ ရာထူး၊ အလုပ်ကိုင်) အဆင်ပြေသောကြောင့် ဆုတောင်းလျှင်ရ၍ ယေရှုဘုရားကို ကိုးကွယ တရားတော်ကို နေ့ညမပြတ် ဆင်ချင်အောက်မေ့ရတာ ..အရင်က ပျင်းစရာထင်ခဲ့သည်။ ယခု မဟုတ်တော့။ စစ်မှန်သောကိုးကွယ
14. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 1/6 By Jesus အကောင်းမြတ် ဆုံးစွဲလမ်းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina ၂၄-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၃ မြစ်ကြီးနား စာတန်နိုင်ငံကျ ဆုံးပြီး၊ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတည် ထောင်ရန်။ ဘုရားသခင်က ဆုံးရှုံးသွားသောအရာများကို ၇ဆ ပြန်ပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ် ။ ဘေးက မိတ် ဆွေကိုပြောပါ .. ဘုရားသခင်က ဆုံးရှုံးသွားသောအရာများကို၇ဆ ပြန်ပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ် ။ ဘာသာတရားထဲက ထွက် ပြီး ဘုရားနဲ့မိတ် သဟာရပြုကြပါစို့။ ဆရာစံတိုးနဲ့ဘန်ကောက် မှတွေ့ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် မြစ်ကြီးနားကိုလာဖို့အကြံ၊ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဘုရားရှင်အကြံရှိလို့အခုလိုရောက် လာပါတယ် ။ ရယူသောသူမဖြစ်စေပဲ၊ ပေးသောသူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပေးကမ်းခြင်းကို သဘောပေါက် ဖို့လိုပါတယ် ။ ကျွ န်တော် အမှုတော် မဆောင်ခင်က၊ အဆိုတော် ဖြစ်ချင်လှပါတယ် ။ နည်းမျိုးစုံလေ့ ကျ င့်ခဲ့ရပါတယ် ။ အမေရိကားက အဆိုတော် ကြီးရဲ့ ဗွီဒီယိုကိုကြည့် ပြီး တံခါးပိတ် လေ့ ကျ င့်ခဲ့ရတယ် ။ ပေတရု၊ယောဟန်တို့ငါတို့မှာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယေရှုနာမတော် ရှိပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့မှာလည်းယေရှုရှိဖို့လိုပါတယ် ။ ဘာသာရေးထဲမှာတော့ ဟန်ဆောင်မှုရှိတယ် ။ လက် မြောက် ၊လက် ချတာ ဘုရားစိတ် မ၀င်စားပါ။ ဟာလေလုယလုပ်တာနဲ့မဆိုင်ပါ။ နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှိဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါလဲ လုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ ဟာလေလုယ ဆိုရင် လက် မြောက် ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် ဘယ် ကပေါ်လာတာလဲ။ လက် မြှောက် ၊လက် ချသူများ အချင်းချင်း ပြောဆိုနေကြတယ် ။ Saturday, 15 June 2013 23:00 administrator
15. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 2/6 ခရစ်တော် ကတော့ လက် မြှောက် ၊လက် ချ အားလုံးကိုချစ်ပါတယ် ။ လက် မြှောက် ပြီး ပေါက် ကရစဉ်းစားနေသူကိုလည်းချစ်ပါတယ် ။ ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှမများတို့၊ ဒီနေ့ကျွ န်တော် ဘာကြောင့် အမှုတော် ဆောင်သလဲဆိုတော့ အလှုငွေအိတ် ရဖို့မဟုတ် ပါ။ ဆရာအခေါ်ခံချင်ဖို့လဲမဟုတ် ပါ။ ကျွ န်တော့် ကိုကြိုက် သလိုခေါ်လို့ရပါတယ် ။ ရီဘရင် Rev..မထည့် လဲရတယ် ။ ဒေးဗစ်လား ခေါ်လဲ ပြသနာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒေးဗစ်လားထဲက ခရစ်တော် ကို မြင်သွားဖို့တော့ ကျွ န်တော် အရမ်းစိတ် ၀င်စားတယ် ။ နှလုံးသားထဲမှာ၊ ကျွ န်တော့် ကိုဒေါက် တာ တပ်စရာလဲမလိုဘူး။ ကျ မ်းစာကျောင်းအုပ်တွေတော့ လိုအပ်လို့ရှိရင် ဒေါက် တာ တပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ကတော့ အပြင်ကလူတွေထက် အတွင်းကလူတွေကိုပိုပြီးစိတ် ၀င်စားပါတယ် ။ ဘုရားကျောင်းထဲမှငုတ် တုတ် ထိုင်ပြီးတော့ ခရစ်တော် ကိုမရသေးတဲ့ သူတွေ ခရစ်တော် ရသွားဖို့ စိတ် ၀င်စားပါတယ် ။ ဘုရားကျောင်းလာတဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒုက္ခရောက် လို့လာတဲ့ သူ၊ ဒုက္ခရောက် မှစိုးလို့လာတဲ့ သူ၊ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဘာကြောင့်မို့အမှုဆောင်လုပ်သလဲဆိုတော့ ခရစ်ယန်ဆိုပြီး၊ ခရစ်တော် ကို မသိသေးတဲ့ လူတွေ၊ ဘုရားကိုတကယ် ရသွားဖိုစိတ် ၀င်စားပြီး၊ အမှုဆောင်လုပ်ရပါတယ် ။ ဘုရားကျောင်း တပါတ် တစ်ခါ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘုရားကျောင်းလာရုံနဲ့ခရစ်ယာန်လို့မသတ် မှတ် နိုင်ပါဘူး။ ငါ့ သိုး ..ဆိုတာ ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့ လူ၊ သိုးထိန်းနဲ့သိုး အဆက် အသွယ် ရှိတဲ့ လူ။ ခရစ်ယာန်ဆိုတာ ခရစ်တော် နဲ့ဆက် သွယ် နေတဲ့ သူကိုခေါ်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဒေဗစ်လားလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ကျေးဇူးတော် ကြောင့် ကျွ န်တော် အဲဒီဘုရားနဲ့အဆက် သွယ် ရတဲ့ အခါ .. ဆလံ၂၃ကိုအလွတ် ရတာထက် ပိုပြီးတော့ အဲဒီသိုးထိန်းနဲ့အဆက် သွယ် ရဖို့ပဲလိုပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဘုရားကျောင်းလာ၊ သီဆိုချီးမွမ်း၊ အလှုငွေထဲ့ ၊ ဆုတောင်း၊ ပွဲတော် စား၊ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ ခရစ်တော် ကိုမရခဲ့ပါဘူး။ ပွဲတော် စားခြင်းဟာ ခရစ်တော် ကိုအောက် မေ့သတိရတဲ့ အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ် ။ အပြစ်လွှတ် တာမဟုတ် ပါဘူး။ မစိုးရိမ်နဲ့လို့ဘုရားကပြောတာကိုသဘောပေါက် ဖို့လိုပါတယ် ။ ပိုက် ဆံနဲ့အာဏာရှိသူက မစိုးရိမ်နဲ့ပြောရင် ကျေးဇူးတင်ကြတယ် ။ ဘုရားက မစိုးရိမ်နဲ့ပြောထားတာကိုဘာကြောင့် ကျွ န်တော် တို့ စိုးရိမ်နေရပါသလဲ။ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ အချိန်တန်ရင် အသီးသီးမယ် ၊ အရွက် မညှိုးနွမ်း၊ နေ့ညမပျ က် တရားတော် ကိုဆင်ချင်အောက် မေ့ပါ။ ကျ န်တဲ့ အရာများကိုငါတာဝန်ယူတယ် လို့ ဘုရားကပြောထားပြီးပါပြီ။ ယေရှုစတင်ပြောတဲ့ စကားက နိုင်ငံတော် တည် လုနီးပြီ၊ နောင်တရကြလော့ ..ဆိုတာ နားလည် ဖို့လိုတယ် ။ (ဘုရားကျောင်း၊ အစီအစဉ်များအား တစ်ခုစီသရုပ်ပြ၊ ပြောဆိုပါသည် ။)
16. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 3/6 ဆုတောင်ခြင်းမှာ လှပအောင် ပြောဆို၊ဆုတောင်းတာထက် ကိုယ် တော် က နှလုံးသားကိုပဲ ကြည့် ပါတယ် ။ နှလုံးသားကိုပဲ စိတ် ၀င်စားတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ။ ဘုရားကျောင်းမလာခင်၊ ၀တ် စားဆင်ရင်မှုများကို အရင်ပြင်ဆင်ပါတယ် ။ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်ထက် အတွင်းနှလုံးသားကိုဘုရားသခင် ပိုပြီးနှစ်သက် ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီကျ မ်းစာကိုပုံပြင်လို့ယူဆခဲ့တယ် ။ ဘုရားရဲ့စကား၊ နှုတ် ကပတ် တော် ၊ တကယ့် ဖြစ်ခဲ့တာတွေလို့သိသွားဖို့တော် တော် ကြာတယ် ။ ယေရှုလက် ၀ါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့တာ၊ သဘောပေါက် သွားသူက ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ၊ အပြစ်တွေ၊ နာကျ င်ခံစားမှုဝေဒနာတွေ အားလုံး ကားတိုင်နဲ့အတူယူဆောင်သွားပြီးဆိုတာ နှလုံးသားမှာ သိရှိသွားသူအဖို့လောကမှာ ဘာမှမလိုတော့ ပါဘူး။ ကချင်၊ကရင်၊ချင်းပြည် နယ် များ ကချင်ပြည် နယ် တစ်ခုလုံးမှာ ကြီးမားသော နိုးထမှုဖြစ်ပါဦးမယ် ။ ၃နှစ်၃ရာ ဆပ်ကပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့သော် ကျ မ်းစာကိုပုံပြင်လိုမှတ် တဲ့ လူတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ။ ကရင်လူမျိုးတွေလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ် ။ အသံကောင်း၊ အဆိုတော် ၊ ပညာတတ် တွေ အများကြီးချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ သာသနာကိုကရင်လူမျိုးများကတဆင့် ကချင်လူမျိုး၊ ချင်းလူမျိုးတွေကိုစတင်သာသနာပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက် ပိုင်းတော့ ကရင်လူမျိုးတွေ အရက် ရဲ့ကျေးကျွ န်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကချင်လူမျိုးတွေ ယုံကြည် သူဖြစ်လာပြီး နောက် ပိုင်းတော့ ဘိန်း ကျေးကျွ န်များဖြစ်လာကြတယ် ။ ချင်းတွေကတော့ ၂မျိုးစလုံး စုံသွားတယ် ။ ဒါတွေ ကျိန်ခြင်းအင်္ဂလာတွေပါ။ ဘုရားသခင် နှလုံးသားထဲမှာ အဆက် သွယ် ရှိသွားရင် ဒါတွေ လွတ် မြောက် မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့် နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားကိုသိရပါမယ် ။ ၂နဲ၂ပေါင်းရင် ၄ရတယ် ဆိုတာ ထင်တာလား၊ သိတာလား။ သိတာဖြစ်ပါတယ် ။ ထင်နေလို့မရပါ။ မိဘ၊ ဖိုးဘွား၊ သင်းအုပ်ဆရာများ ပြောပြလို့ဘုရားကိုသိရတာထက် ၊ မိမိကိုယ် တိုင် ကိုယ် တော့ ကိုဂယနဏ သိဖို့လိုပါတယ် ။ ကျွ န်တော် လည်း၂ရက် ကြာအောင် မေ့မျောနေပြီး၊ သတိရတဲ့ အချိန်မှာ ဆေးရုံ၊ ပိုက် တွေနဲ့တွဲလောင်း၊ ဆက် နေရတဲ့ အခြေအနေရောက် နေပါတယ် ။ ၇ရက် တိုင်အောင် ဝေဒနာများခံစားပြီးမှာ၊ ဘုရားရှင်နဲ့အတူရှိမှုကိုခံစားရတယ် ။ ဘုရားသခင်နဲ့ကျွ န်တော် နဲ့ အတူရှိနေကြောင်း သိရှိသွားပါတယ် ။ ဘုရားမျ က် မှောက် တော် ကိုအရမ်းဆာငတ် ပါတယ် ။ မောရှေရဲ့အသက် တာလိုကိုယ် တော် အတူရှိအောင်၊ စိတ် အထင်နဲ့မလုပ်၊မသွားတော့ ပဲ၊ ကိုယ် ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ ကိုယ် သိနေရမယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘုရားကိုပူဇော် တဲ့ အခါ စိတ် အထင်နဲ့မလုပ်တော့ ပါ။ ဘုရားအလိုတော် ကိုသိပြီးပူဇော် တဲ့ အဗေလကို ဘုရားသခင်နှစ်သက် ပါတယ် ။ ကိုယ့် စိတ် အလိုအတိုင်း ပူဇော် တဲ့ ကာက္ကိန ရဲ့ ပူဇော် မှုကိုဘုရားသခင် လက် မခံပါဘူး။ ယုံကြည် ခြင်းသည် ၊ ကြားနာခြင်းမှလာပြီး၊ ဘုရားအလိုတော် ကိုသိဖို့လိုပါတယ် ။ ကိုယ့် စိတ် အထင်နဲ့လုပ်ရင် ဘုရားငြင်းပယ် ခြင်းခံရပါတယ် ။
17. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 4/6 ဆရာ့ ကိုငွေလာလှုတယ် ဆိုရင်၊ သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်း သုံးစွဲရတယ် ။ ဆရာအတွက် သုံးပါ ဆိုမှာ ကိုယ့် အတွက် သုံးရတယ် ။ သစ္စာရှိရပါတယ် ။ ဘုရားကောင်းကြိးပေးဖို့ဆိုရင် အစွဲတွေ ဖြုတ် ဖို့လိုပါတယ် ။ ဂိုဏ် ဂနအစွဲ၊ လူမျိုးအစွဲများကိုရှိနေရင်၊ ကမ္ဘာဦးကျ မ်း အခန်း၁၁ကိုဖတ် ကြည့် ပါ။ (ကျ မ်းစာဖတ် သည် )။ အခန်း၁၂တွင် ဘုရားကုနံဝိညာဉ်၊ သစ္စာနှင့် ကိုးကွယ် သော အာဗြာဟံကိုဘုရားသခင် တွေ့ရှိ၊ စိတ် တော် နှင့်တွေ့ပါသည် ။ ဤအမှုကိုအမှုးပြုကြသည် ဆိုသည် မှာ ဘုရားသခင်အလိုတော် ကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ် ။ စာတန်လည်းငါ .. ၅လုံးနှင့် ကျ ဆုံးသွားပါတယ် ။ ကနေဒါလူမျိုးများ၊ အသင်းတော် မှာ တရားမဟောခင် ၃နာရီလောက် သီဆို၊ချီးမွမ်းကြတယ် ။ သူတို့မှာ... ဘုရားပဲရှိတယ် ..တဲ့ ။ လူကြီးတွေလဲ သီဆို၊ချီးမွမ်းရင်း တရားဟောဖို့စောင့်ရတယ် ။ ဟောရင်လဲ ၀ိညာဉ်ခွန်အားအတိုင်း ၃နာရီလောက် ဟောရတယ် ။ တနာရီကြာတရားဟောရင် ၀ိညာဉ်မကြီးထွားသေးလို့..တဲ့ ။ ကျွ န်တော် အဲဒီအသင်းတော် မှာ အချိန်ပေး၊ ကြီးထွားလာခဲ့ရပါတယ် ။ နောက် ပိုင်း မျ က် မှောက် တော် ထဲမှာ အစွဲအလမ်းများ ပျောက် သွားရပါတယ် ။ ဘာသာစွဲတောင် မရှိတော့ ပါ။ လူအားလုံးကိုမခွဲခြား၊ အစွဲများ ဖျောက် နိုင်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ကျွ န်တော် လာခြင်းဟာ အရာခပ်သိမ်းမှာ အကြီးမြတ် ဆုံးဖြစ်ကြောင်း လာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့ တပည့် ဖြစ်စေဖို့၊ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအတွက် မဟုတ် ပါ။ သင့်အားဖြင့် ရောက် တဲ့ နေရာမှာ ကောင်းကြီးရအောင်၊ လူမျိုးတကာ၊ ရောက် ရာ တကမ္ဘာလုံးမှာကောင်းကြီးရပါစေ။ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ပဲ ရပ်မသွားစေဖို့၊ ယေရှုကိုတကယ် ရရှိသွားရင် သင့်မှာ ဂိုဏ် ဂနအစွဲများ မရှိတော့ ပါဘူး။ ယေရှုက သူ့ကိုသတ် နေတဲ့ လူတွေကိုသူတို့မသိလို့လုပ်နေပါတယ် ၊ ခွင့်လွှတ် ဖို့ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ။ သူများ မုန်းတဲ့ လူကိုကိုယ် ကချစ်နိုင်ရင် ဒါ..ခရစ်တော် ရဲ့ စိတ် သဘောပါ။ အမေရိကန်များပေးဆပ်မှု ရှိသမျှ စွန့်၍၊လက် တော် သို့အပ်မည် ..သီချင်းစပ်သူအမျိုးသမီးက၊ သူ့ယောင်္ကျား အာဖရိကသွား သာသနာပြုစဉ် သတ် ပြီးစားပစ်ခံရတယ် ။ နောက် သူ့သားကြီးကိုသွားဖို့ထပ်လွှတ် တယ် ။ သူ့ယောင်္ကျားအတွက် မပူဘူး။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ရောက် မှာ၊ ဒါပေမဲ့ သတ် စားတဲ့ အာဖရိကလူများအတွက် ပြောင်းလဲစေဖို့သူ့သားကြီးကိုထပ်လွှတ် ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သားကြီးလည်းသတ် စားခံလိုက် ရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့သားတစ်ယောက် ပြီးတစ်ယောက် စွန့်လွှတ် ပြီးတဲ့ အခါ အငယ် ဆုံးသားကို လွှတ် ပြန်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူမ မျ က် ရည် ကျ တယ် ။ အာဖရိကန်တွေ မာကြောပြီး၊ လူသတ် စားတဲ့ သူတွေ၊ ငါတို့ကိုအသက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ယေရှုမေတ္တာကိုသိဖို့သားအငယ် ဆုံးကို လွှတ် ခဲ့ပါတယ် ။ နောက် ဆုံးသားအငယ် ဆုံးအားဖြင့် အာဖရိကန်များ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် ။ ဒါမျိုးတွေကြောင့် အမေရိကန်များ ကောင်းကြီးများစွာ ခံစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
18. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 5/6 အိန္နိယမှာ သာသနာပြုသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ၊ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့သားကိုအရှင်လတ် လတ် မီးရှို့သတ် ခဲ့တဲ့ လူတွေကိုခွင့်လွှတ် တယ် ။ အိန္နိယအစိုးရ တာဝန်ခံက အမေရိကန်အမျိုးသမီးကိုပြန်ဖို့ပြောပေမဲ့၊ သူမက သူတို့ခရစ်တော် ကိုသိရှိ၊လက် ခံလာတဲ့ အထိနေမယ် လို့ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါတယ် ။ Relationship with God ဘုရားနဲ့တကယ် အဆက် အသွယ် ရှိထားတဲ့ လူကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ကိုယ့် ထဲမှာ ဘုရားတကယ် ရှိပြီလား? သေရင်ဘယ် သွားမလဲဆိုတာ သူကောင်းကောင်းသိပါတယ် ။ ခရစ်တော် နဲ့အတူလက် ၀ါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတဲ့ လူဆိုးကြီးလည်းခရစ်တော် ကိုလက် ခံပြီးတဲ့ နောက် ပရာဒိသုဘုံ(ကောင်းကင်ဘုံ)ကိုရောက် မယ် ဆိုတာ သိသွားပါတယ် ။ ရှင်ပေါလုဟာ ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက် အသက် ရှင်ခဲ့ရာကနေ ခရစ်တော် ရရှိပြီးတဲ့ နောက် လူမျိုးတကာတို့အတွက် ခရစ်တော် အကြောင်း ဧ၀ံဂေလိပြောခဲ့တယ် ။ ရှင်ပေါလုဟာ ခရစ်တော် အတွက် အသက် ရှင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အကောင်းမြတ် ဆုံးစွဲလမ်းမှု တချို့က ဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲ ဘုရားရှိတယ် ထင်ကြတယ် ။ ဘုရားကျိန်းဝတ် တယ် ထင်ကြတယ် ။ ဒါဆို ဘုရားရဲ့နေရာက သေးသေးလဲပဲဖြစ်မျာပေါ့ ။ ကျ မ်းစာမှာ ပါပါတယ် ။ ဘုရားကျောင်းထဲ ဆေးလိပ်၊ အရက် မသောက် ရဲဘူး။ အပြင်မှာလုပ်ကြတယ် ။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာတော့ အဟုတ် ကြီး၊ အပြင်မ တခြားစီ၊ ဤလောက၏အလင်း၊ ဆားဖြစ်သည် ..ဆိုတာ အပြင်လောကမှာလည်းစံနမူနာဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ပေါလု၊ ဂျ ပ်ဆင်..နာမည် တူတွေက နာမည် လေးကောင်းပြီး၊ လောကအလင်းမဖြစ်တာမျိုး၊ တကယ် အလင်းဖြစ်ဖို့၊ ဘုရားမျှော် လင့်သလိုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဘုရားနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့၊ ဆက် သွယ် မှုရှိသွားရင် မကောင်းတာတွေကိုအလိုလိုမလုပ်ချင်တော့ ပါ။ အဲဒါတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ သာတဲ့ ဘုရားသခင်ကိုရရှိသွားတဲ့ အခါ မကောင်းတဲ့ စွဲလမ်းမှုများဟာ မစင်ကဲ့ သို့ဖြစ်သွားတယ် ..လို့ဆိုပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ကိုစွဲလမ်းမှုဟာ လောကအစွဲ ကာမဂုဏ် ၊အာရုံများထက် အများကြီးကောင်းမြတ် ပါတယ် ။ အကောင်းမြတ် ဆုံးသော သခင်ယေရှုကိုရထားပြီးရင်၊ လောကအရာအားလုံးဟာ မစင်လိုပဲ မခင်တွယ် တော့ ပါဘူး။ စွန့်လွှတ် နိုင်ပါတယ် ။ လူမည် သည် ကား ခရစ်တော် ရှိလျှ င် ခပ်သိမ်းအရာများ အသစ်ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ယေရှုကြောင့်သာ အသက် ရှင်ကြောင်း သီဆိုဆပ်ကပ်ကြပါစို့။ ဆုတောင်းကြပါမယ် ။ ယေရှုကြောင့်သာ.. အသက် ရှင်သည် ၊ ယေရှုကြောင့်သာ ပြည့် စုံသည် ။ ယေရှုကြောင့်ပဲ...... ဆရာဒေးဗစ်လား
19. 10/4/2014 By Jesus အေကာင်◌း◌မြတံ◌း စဲလမ်◌းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1657%3Aby-jesus-rev-david-lah&tmpl=component&print=1&layout=def… 6/6 ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၃ (မြစ်ကြီးနား၊ အားသစ်လောင်းပွဲ) http://www.youtube.com/watch?v=Y2zzomU2mBI
Clean coal technologies in japan.and.myanmar.electricity.2018
Clean Coal Technology & Haing oo.coal.fire.power.plants